Ny tsy fahampian'ny faniriana ara-nofo amin'ny mpivady | Bezzia
Maria Jose Roldan | 22/06/2022 22:20 | ara-pananahana
Ny faniriana ara-nofo dia zavatra mikoriana tsy tapaka amin'ny ankamaroan'ny olona. Mety hiova izany noho ny toe-javatra manokana sasany, toy ny adin-tsaina na ny fahasalamana ara-pihetseham-po. Amin'izany fomba izany, ny olona iray sahiran-tsaina dia mety tsy miraika amin'ny firaisana ara-nofo na mila firaisana ara-nofo mba hanamaivanana ny olana ateraky ny adin-tsaina.
Raha ny mpivady, ny iray amin'ireo antoko dia matetika manana faniriana ara-nofo kokoa noho ny iray hafa, izay matetika miteraka olana sasany. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia milaza aminao izahay ny fomba fihetsika raha toa ka ny iray amin`ireo mpiara-miasa dia manana faniriana ara-nofo kokoa noho ny hafa.
1 Ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana
2 Fanehoana fitiavana sy fitiavana ny mpivady
3 Avereno jerena ny fahazarana isan'andro
Ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana
Ilaina ny fifampiresahana sy fifampiresahana amin'ny mpivady rehetra. Raha misy olana sasany rehefa manao firaisana ara-nofo, Ny firesahana zavatra dia manampy amin'ny fisorohana ny fifandirana sasany ao anatin'ny fifandraisana. Tsy voatery ho adidy ny firaisana ara-nofo, tokony ho fotoanan'ny firaisana ara-nofo ao anatin'ny mpivady izay manampy amin'ny fanamafisana ny fifamatorana noforonina.
Ny fiaraha-miory dia iray amin'ireo singa ilaina amin'ny famahana olana ateraky ny firaisana ara-nofo. Tsy maintsy mahay mametraka ny tenanao eo amin'ny toeran'ny namanao ianao mba hahatakatra amin'ny fotoana rehetra ny anton'ny tsy firaharahiana toy izany sy ny tsy fahampian'ny faniriana ara-nofo.
Fanehoana fitiavana sy fitiavana ny mpivady
Ny firaisana ara-nofo dia tsy tokony ho zavatra mekanika na mangatsiaka fa fotoana feno fientanam-po sy erotisma izay miteraka fifalian'ny mpivady. Alohan'ny hanaovana firaisana ara-nofo dia zava-dehibe ny manome lanja ny fanehoana fitiavana sy firaiketam-po amin'ny mpiara-miasa. Ny oroka sy ny safosafo amin'ny mpivady no tokony ho santatra amin'ny firaisana ara-nofo.
Avereno jerena ny fahazarana isan'andro
Misy lafin-javatra maromaro isan'andro izay mety hahatonga ny tsy firaharahiana amin'ny sehatra ara-pananahana. Indraindray ny reraka, ny havizanana na ny adin-tsaina no ao ambadiky ny olana ara-pananahana. Noho izany, zava-dehibe ny manova ireo fahazarana ireo ho an'ny olona salama izay mamela ny famelomana indray ny libido sy ny filan'ny nofo. Ny masturbation amin'ny fotoana sasany dia afaka manampy ny faniriana ara-nofo hiverina amin'ny mpivady. Ny fandraisan'anjaran'ilay olon-kafa amin'io fotoana io dia afaka mamaha ny olana momba ny filan'ny nofo ary manampy amin'ny famelomana indray ny libido. Raha toa ka lasa mahazatra sy mahazatra ny masturbation toy izany, dia ilaina ny manatona manam-pahaizana iray izay mahafantatra ny fomba hamaranana ity olana ity.
Raha fintinina, firaisana ara-nofo dia tokony ho fotoana manokana sy mahagaga ho an`ny mpivady rehetra. Raha toa ka lasa adidy tena izy io, dia azo inoana fa hanomboka hipoitra ny olana ao anatin'ny fifandraisana. Raha miharihary ny tsy firaharahiana ara-nofo, dia ilaina ny miresaka amin’ny mpivady mba hahitana vahaolana mahasoa azy ireo. Tsarovy fa ny firaisana ara-nofo dia tokony ho zavatra an-tsitrapo ary tsy maintsy ho fotoana mahafinaritra ho an'ny roa tonta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » ara-pananahana » Ny tsy fahampian'ny faniriana ara-nofo eo amin'ny mpivady
Feno loko ny fanangonana ny fahavaratra 2022 an'ny Mango